သက်တန့်ချို: ကျွန်ုပ်နှင့်သွေးဆာနေသောမြို့တစ်မြို့ (အပိုင်း ၃)
ထို့နောက် ဒေါက်တာနိုင်ဇော်က ဆက်လက်၍
" အဲဒီတော့ ကျွန်တော်လည်း မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်ရင် အကြောင်းကြားပါ့မယ်ဆိုပြီး ပြန့်လာခဲ့တယ်ဗျ ..ဒီတော့ အခု ဒီပုံ ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် Ghost City နဲ့ Dr. Thomas ရဲ့ကြားမှာ လှို့ဝှက်ထူးဆန်းတဲ့ ဆက်နွယ်မှု တစ်ခု ရှိရမယ် ဗျ သူ့ပုံဟာ Dracula တစ်ကောင်ရဲ့ပုံနဲ့ တူမနေဘူးလား ကျွန်တော်တော့ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူ့ဖိတ် ခေါ်ချက် အတိုင်း လိုက်သွားပြီး စုံစမ်းကြည့်ချင်တာပဲဗျာ ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ စွန့်စားခန်းတွေနဲ့ ပြည့်နှက် နေတာအမှန်ပဲဗျ ကိုသက်တန့်ရော ဘယ်လို ထင်လဲ "
" အင်းဒီကိစ္စက သာမန်တော့ မဟုတ်လောက်ဘူးဗျ နောက်ပြီး Ghost City ဆိုတာက အာဖရိကကနေ မိုင် ၁၀၀ လောက် ဆက်သွားရပြီး ဒီမြို့လေးအကြောင်းကို လူတွေသိပ်မသိကြဘူးဗျ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စွန့်စာခန်း တွေဖွင့် ချင်နေ တာနဲ့ အတော်ပဲပေါ့ဗျာ ဟဲဟဲ..ဒါနဲ့ ဒီကညီမကရော "
" သီတာလား..သူလည်းလိုက်မယ်ဆိုပြီး လိုက်ခဲ့တာပဲဗျာ နောက်ပြီးသူက သွေးရောဂါဆရာဝန်ဆိုတော့ ဒေါက်တာ သောမတ်စ်ရဲ့ စမ်းသပ်မှုတွေကို လိုက်လေ့လာချင်တယ် ပူဆာနေတာနဲ့ ခေါ်လာခဲ့တာပဲဗျ နောက်ပြီး သူပါရင်လည်း ကျွန်တော်တို့အတွက် ဒေါက်တာသောမတ်စ်ကို စုံစမ်းလေ့လာတဲ့အခါပိုအကျိုးရှိနိုင်ပြီး သူ့ အတွက် လည်း မပူရဘူးဗျ သူက ကာရာတေးမှာ ခါးပတ်နတ်ချန်ပီယံလေဗျာ "
ဒေါက်တာနိုင်ဇော်ပြောသဖြင့် ကျွန်ုပ်မှာ သီတာအား လှည့်ကြည့်လိုက်ရာ သူမက ပြုံးပြီးသာ ကျွန်ုပ်အား စိုက်ကြည့် နေလေသည် ။ ဤမျှ နုနယ်ချောမောသော မိန်းကလေး တစ်ဦးက ယောင်္ကျားများနှင့် ရင်ဘောင် တန်းပြီး အန္တရာယ်ခရီးအား လိုက်မည်ဆိုသော အခါ ကျွန်ုပ်မှာ သူမအတွက်စိုးရိမ်ပြီး သိပ်ပြီး မလိုက်စေလိုလှပေ ။ ကျွန်ုပ် တွေးနေသည်ကို ဒေါက်တာ နိုင်ဇော်က ရိပ်မိသွားဟန်ဖြင့်
" သူ့အတွက်တော့မစိုးရိမ်ပါနဲ့ ကိုသက်တန့်ရေ သူ့ရဲ့ တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်က ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် ထက်တော့ မညံ့လှဘူးဗျ နောက်တော့ တွေ့ရပါလိမ့်မယ် ဒီနေ့ပဲ ကျွန်တော်ဒေါက်တာသောမတ်စ်ကို ကျွန်တော် တို့ ငါးယောက်လာမယ့်အကြောင်း အကြောင်းကြားလိုက်တော့မယ် ၁ လအတွင်းမှာ သူ့ဆီက ဗီဇာ ရောက်လာ မှာပါ "
" ကဲ ဒီလိုဆိုတော့လည်း ကျွန်တော်တို့ လည်း ဒီကြားထဲ ခရီးထွက်ဖို့ လိုအပ်တာတွေ ပြင်ဆင်ကြတာပေါ့ဗျာ အခုတော့ ထမင်းစားလိုက်ကြရအောင် လာဗျာ ထမင်းစားခန်းထဲသွားရအောင် လာညီမ "
သို့နှင့် ကျွန်ုပ်က ဦး ဆောင်ပြီး ထမင်းစားခန်းသို့ရောက်သောအခါ တပည့်ကျော်ထွန်းလူနှင့် ညိုမောင်တို့ နှစ်ဦး ချက်ပြုတ် ထားသော စားသောက်ဖွယ်ရာများကို စုံလင်စွာ တွေ့ရလေသည် ။
" လာလာ ဆရာ နိုင်ဇော်ဆရာ ကိုမျှော်နေတာဗျ ဒီအတိုင်းကြီး အိပ်လိုက်စားလိုက်နဲ့ အတော်ကို ပျင်းနေတာဗျ ဒီတစ်ခါ တော့ ပွဲကြီးပွဲကောင်းပဲပေါ့ "
" ဟဲဟဲ ဒါပေါ့ ကွ ဒီတစ်ခါ နိုင်ငံခြား ခရီးစဉ်သွားရမှာလေ အာဖရိက အထိဆိုပါဆို့ "
" ဟာ ဟုတ်လား ဆရာ ပွပြီပဲ ကျွန်တော်တို့ တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးဘူး ဗျ အပီပဲ "
" အင်းဒီတစ်ခါတော့ အရင်တခါ လူသားစားကျွန်းထက် အန္တရာယ်များလိမ့်မယ်ထင်တယ်ကွ "
" ဟဟ ဆရာတို့ နှစ်ယောက်ရှိနေမှတော့ သေမင်းနဲ့ တောင်စစ်ခင်းရဲပါတယ်ဗျာ ကဲကဲ ကျွန်တော်တို့ လက်ရာ တွေ စားကြပါဦးနော် ဆရာသက်တန့်လက်ရာလောက်တော့ ကောင်းမှမဟုတ်ဘူး ဟီး သူက တောတွင်း စာဖိုမှုးလေ "
" ဟုတ်ပါ့ မင်းဆရာကတော့ တောထဲရောက်ရင် ရှိတာနဲ့ ရအောင်ချက်ပြုတ်တတ်တယ်ကွာ ကဲကဲ သီတာရေ ၀အောင် စားနော်ဘယ်သူ့ကိုမှ အားနာစရာမလိုဘူး ဒါအကိုနဲ့ ညီအကိုတွေပဲ "
" ဟုတ်ကဲ့ပါ အကို နိုင်ဇော်အကို လည်း တစ်ခါတည်းစားလေ "
ဟု သီတာက ကျွန်ုပ်အား လှမ်းပြောလိုက်ရာ ကျွန်ုပ်လည်းသူမဘေးတွင် ၀င်ထိုင်လိုက်လေသည် ။ သို့နှင့် ထမင်း စားသောက်ရင်းကျွန်ုပ်တို့ ငါးဦးလည်း ခရီးစဉ်းအား အသေးစိတ်တိုင်ပင်ကြလေသည် ။ သို့နှင့် ထမင်းစား သောက်ပြီး သည်နှင့် ဒေါက်တာနိုင်ဇော်မှာ ဒေါက်တာသောမတ်စ်အား ခရီးစဉ်ကို အင်တာနက်လိုင်းမှ အကြောင်း ကြားရန် ထွက်ခွာသွားလေတော့သည် ။ ထွန်းလူနှင့် ညိုမောင်တို့ကား အိမ်တွင် ခရီးထွက်ရန်အတွက် ၀ယ်ရမည့်စာရင်းများကို ပြုစုနေလေတော့သည် ။
ကျွန်ုပ်နှင့် သီတာတို့လည်း ခြံဝင်းထဲရှိ ခုံတန်းလျားလေးသို့ စကားပြောရန် ထွက်ခဲ့ကြလေတော့သည်။ သေချာ စကားပြောကြည့်သောအခါ သီတာမှာ လွန်စွာ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့လှပြီး နက်မှောင်သော မျက်ခုံးနှင့် နီထွေးသော နှုတ်ခမ်းအစုံတို့မှာ ကျွန်ုပ်၏ ရင်အား ကြီးမားလေးလံသော အရာဝထ္ထု တစ်ခုနှင့် ထုနှက်နေသကဲ့လို့ ရှိနေလေသည် ။ ကျွန်ုပ်သည် လောကတွင် မိန်းမလှလေးပေါင်းများစွာနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရဘူးသော်လည်း သီတာကဲ့သို့ ပစ်မျိုးမှည့်မထင် အလှမျိုးတော့ တွေ့ဖူးခြင်းမရှိကြောင်း ၀န်ခံရပေမည် ။ ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားကလည်း တိုက်ခိုက်ရေးသမား တဦး ပီသစွာ သူ့အချိုးနှင့်သူ လွန်စွာ ကြည့်ကောင်းလှပြီး အရပ်အမောင်း အသားအရည်မှလည်း လွန်စွာ ပနံသင့်လှပလျှက်ရှိလေသည် ။ သူမနှင့်စကား ပြောသည့် အချိန်တွင် ကျွန်ုပ်၏ ရင်မှာ တသိမ့်သိမ့် တုန်လျှက်ရှိပေ၏ ။ သူမှနှင့် တစ်ခရီးတည်း ခရီးရှည်သွားရမည်မှာ ကျွန်ုပ်အဖို့ တစ်ဖက်က သူမအတွက်စိုးရိမ်မိသကဲ့သို့ တစ်ဖက်ကလည်း ကြည်နူးသာယာလျှက်ရှိပေသည် ။
" ဒါနဲ့သီတာက အခုလို အန္တရာယ် များတဲ့ ခရီးကိုလိုက်မယ်ဆိုတော့ သီတာရဲ့ ပိုင်ရှင်က ခွင့်ပြုရဲ့လား "
ကျွန်ုပ်၏ မေးသံအဆုံးတွင် သီတာဆိုသော မိန်းမချောလေးမှာ ကျွန်ုပ်အား ကြည့်ရင်း တသိမ့်သိမ့်ရယ် မောလေတော့သည် ။
" အကိုရယ် အကိုက သိပ်ရိုးတာပဲနော် သီတာမှာ ပိုင်ရှင်ရှိလား မေးလည်း ရပါတယ် နော် သီတာမှာ ဘယ်ချစ်သူ ရည်းစားပိုင်ရှင်မှမရှိပါဘူး ရှင် အကို့မှာသာ ဆရာဝန်ချောချောလေးဆိုတော့ မိန်းကလေးတွေ ၀ိုင်းဝိုင်း လည်နေမှာပေါ့နော် "
" အာ.. ဘယ်ကလာသီတာရယ် အကိုက စွန့်စားမှုတွေပဲ ၀ါသနာပါတာလေ ဒီတော့ အရင်ကတော့ ဒီလို ချစ်သူရည်း စားကိစ္စတွေကို စိတ်မ၀င်စားပါဘူး "
" အရင်ကတော့ဆိုတော့ အခုရော "
" အင်း အခုတော့ မပြောတတ်သေးဘူး စိတ်ဝင်စားရတော့မယ်ထင်တယ် "
ဟု ကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်ရာ သီတာ၏ ဖြူဖွေးသန့်စင်သော မျက်နှာလေးမှာ ပန်းနုရောင်လေးတွေသန်းသွားပြီး ရှက်သွား ဟန်ဖြင့်ခေါင်းငုံ့သွားလေရာ ကျွန်ုပ်၏ ရင်ထဲမှာလည်း ဗုံ အလုံး တစ်ရာခန့်တီးနေသကဲ့သို့ တဒိန်း ဒိန်းရှိနေလေတော့သည် ။
သို့နှင့် နောက်ပိုင်းရက်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့မှာ လိုအပ်သော အင်္ကျီဘောင်းဘီ ၊ ဓါးမြှောင် ၊ ရေဘူး ၊ စသည် တို့အပြင် လိုအပ်သည်များကို အသေးစိတ်စီမံရလေတော့သည် ။ ဒေါက်တာနိုင်ဇော်တို့ရောက်ပြီး ၃ ပတ်မျှ အကြာ တွင်ဒေါက်တာသောမတ်ထံမှကျွန်ုပ်တို့ငါးဦးအတွက် Visa ရောက်ရှိလာလေတော့သည် ။ ဗီဇာ ရောက်ပြီး နောက်ငါးရက်မြောက်နေ့တွင် ခရီးထွက်ရန်သတ်မှတ်လိုက်လေတော့သည် ။ ဤအတောအတွင်း လေယဉ်လတ်မှတ် နှင့် ညိုမောင်ထွန်းလူတို့အတွက် ပါ့စပို့စ်ကိစ္စအား စီမံရလေသည် ။ ကျွန်ုပ် ဒေါက်တာ နိုင်ဇော်နှင့် သီတာတို့ ၃ ဦးမှာမှု ပါ့စပို့စ်များရှိပြီးသားဖြင်၍ များစွာ အခက်အခဲမရှိလှပေ ။ သို့နှင့် ရန်ကုန်အ ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကြီးမှနေ၍ အာဖရိကနိုင်ငံ Cape Town မြို့အထိ ကြီးကြီးမားမား အခက်အခဲ တစ်စုံတစ် ရာ မတွေ့ခဲ့ရ၍ လမ်းခရီးစဉ်အား အသေးစိတ် မဖော်ပြတော့ပေ ။
ခရီးစဉ်တစ်လျောက်လုံး ရယ်မောပျော်ရွှင်စွာဖြင့် လာခဲ့ကြရာ အန္တရာယ်များသော ခရီးတစ်ခုအား သွားနေသည် နှင့်မတူလှပဲ ပျော်ပွဲစားထွက်လာသည်နှင့်ပင်တူပေတော့သည် ။ Cape Town မြို့သို့ရောက်သောအခါ ကျွန်ုပ်တုိ့ခရီး စဉ်ကား အဆုံးသတ်လေတော့သည် ။ Ghost City သို့သွားရန် ကိုယ်ပိုင်မော် တော်ယဉ်ဖြင့် သွားမှသာရောက်နိုင်ပေတော့သည် ။ သို့နှင့် Cape Town မြို့တွင် လိုအပ်သောအရာများကို ၀ယ်ရင်း ကျွန်ုပ်တို့အဖို့လည်း လိုရမယ်ရ သေနတ်တစ်လက်စီ ၀ယ်ခဲ့ကြလေတော့သည် ။ အာဖရိက ရှိ Cape Town မြို့လေးတွင် မှောင်ခိုရောင်းချသော လက်နက်ဆိုင် အများအပြားရှိလေသည် ။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အတူ လိုက်လော သီတာမှာ ဂျင်းပင် ဘောင်းဘီနှင့် ဂျာကင် အင်္ကျီကို ၀တ်ဆင်ထားရာ လွန်စွာကြည့်ကောင်းလှပေသည် ။
အပိုင်း (၄) မျှော်.......
Posted by သက်တန့်ချို at 9:48 AM
ဟေး ကိုသက်တန့်လေး ကောင်းတယ်နော့ အားပေးနေတယ် ညီမချောချောလေးတော့ရှိဘူးဗျို့
ko July 22, 2010 at 7:00 PM
ကိုဇော် July 22, 2010 at 10:58 PM
ကိုသက်တန့် . . .
ခင်ညားဂျာ. .ကောင်မလေးကို ဒီလို တွေ့တွေ့ချင်း ပြောရလား။ ဟွန်း . .
blackroze July 23, 2010 at 12:43 AM
ဆောင်းနှင်းရွက် August 6, 2010 at 9:49 PM
ခွိခွိ ... :)
ကဲကဲ .. ဆက်ဖတ်လိုက်ဦးမယ် .. !